Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAisling
Indlu yelizwe elikude eWest Yorkshire,>5miles ukusuka eTodmorden naseHebden Bridge. Indawo yokuhlala esandula ukulungiswa; ikhitshi / isidlo sangokuhlwa, amagumbi okulala amabini anesilingi eziphantsi, igumbi lokuhlambela langoku, igadi yabucala ebiyelweyo, izilwanyana zasekhaya eziziphethe kakuhle zamkelekile, ezibekwe phezu kwentlambo enemibono emangalisayo kunye nokufikelela kwangoko kumaphandle ajikelezileyo.
Indlwana yethu ikwindawo yasemaphandleni ethandekayo, ijikelezwe ziindlela zokuhamba kunye neengoma zebhayisekile zeentaba, ezinombono onomtsalane wepanorama kuyo yonke iCalder Valley. Ilungile ukuba uyathanda ukuba ngaphandle kwindawo entle yaseWest Yorkshire. I-Todmorden kunye nemarike ye-fab kunye nee-pubs yi-30-40 min ukuhamba phantsi kwentlambo, kunye ne-Hebden Bridge i-15 min drive.
I-cottage izimele ngokupheleleyo, idityaniswe nendlu yethu yasefama, kodwa inendawo yokupaka kunye negadi encinci yabucala. Sihlala ecaleni kwendlu yasefama kwaye siya kuhlala sikhona ngeempelaveki ukuba kukho nantoni na oyifunayo, kodwa ungakhathazeki, siya kukunika indawo eninzi ngexesha lokuhlala kwakho.
Ubumelwane bethu bunezinye izindlu ezi-2 zeefama zamatye kwindlela yelizwe, efikelelekayo kwindlela enkulu-Kebs Rd/Long Causeway. Uya kudlula zombini ezi zinto kwaye uwele amanye amasimi ama-2 ngaphambi kokuba ufike kwi-cottage. Sikwindawo ekude, akukho sithuthi sikawonke-wonke esikufutshane, ngoko ke ukuba uza ngaphandle kwemoto nceda uzilungiselele ukuhlawula iiteksi.
Kufuphi sinelali yaseBlackshaw Head, iimayile ezimbalwa ecaleni kweLong Causeway ukuya ngase-Hebden Bridge, apho unokufumana iNew Delight Inn kunye neFama kaMay Shop. Ulonwabo olutsha luhambo lwemizuzu engama-50 ukusuka kwindlwana kwaye ngaphandle kwe-pub yindawo yokumisa ibhasi ye-Heptonstall kunye ne-Hebden Bridge.
I-Todmorden yidolophu yentengiso enelifa lemizi-mveliso kunye neliso kwikamva kunye nenkqubo yayo eyaziwayo kwihlabathi liphela yokwanela eyaziwa ngokuba yi-Incredible Edible. Iimarike zayo zangaphakathi nangaphandle (open weds to sun) zineevenkile ezithengisa imveliso yasefama yasekuhlaleni. Ibhulorho edumileyo ye-Hebden ineevenkile ezininzi ze-boutique, iikhefi, iindawo zokutyela, iminyhadala eyahlukeneyo kunye neRally yemoto yonyaka.
Ngaphaya koko yiHaworth kunye nelizwe laseBronte, iKeighley kunye neWorth Valley Steam Railway. IHalifax kunye neHolo yePiece kunye nemyuziyam yase-Eureka, indawo yeTrasti yeSizwe yaseHardcastle Craggs kunye noMthi wokuRingiza eBurnley; zonke zingaphakathi kwiradiyasi yeemayile ezili-10. Ukusuka eTodmorden kunye ne-Hebden Bridge kukho unxibelelwano oluhle kakhulu lukaloliwe oluya eManchester, eLeeds, eYork naseBlackpool.
Ifumaneka kwiholide yexesha elifutshane ivumela ukuba sizame ukuba bhetyebhetye kangangoko sinakho ukulungiselela iimfuno zakho.
Nceda uqaphele ukuba kukho ubuncinane ubusuku obu-3 bokubhukisha ngeeholide zebhanki.
4.80 out of 5 stars from 256 reviews
4.80 · Izimvo eziyi-256
Iimbono ezivela kwi-cottage ziyamangalisa, i-panoramic kwaye zifikelela kude. Sine-pub enkulu yasekhaya eBlackshaw Head eyenza ibhiya yayo phezulu kwindlela esuka kwindlu ebizwa ngokuba yiNew Delight (http://www.newdelightinn.co.uk/), kunye nendawo yokutyela ethandekayo ebizwa ngokuba yi-Staff of Life nje. ezantsi entilini.
Umbuki zindwendwe ngu- Aisling
Can't live without my dogs, and love being outdoors, even in the rain!
Sihlala ebumelwaneni ukuze usibone sijikeleze, ngokuqhelekileyo sihamba ngezinja zethu, silapha ukuba uyasifuna, kodwa sithanda ukukunika indawo yakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Todmorden